Nin eygiisa jirdilay oo xabsi lagu xukumay | Somaliska
Nin 22 sano jir ah oo ku nool Stockholm ayaa lagu xukumay 1 sano iyo bar xabsi ah ka dib markii uu jirdilay eygiisa oo u geeriyooday dhaawacyada. Xabsigaan ayaa noqonayaa kii ugu dheeraa ee lagu xukumo dadka xayawaanka jirdila.
Eygaan oo 9 isbuuc kaliya jiray ayaa caruur waxay soo heleen baqtigiisa oo bac ku jira. Ka dib markii hospitaalka la geeyay ayaa la ogaaday in eyga yar aad loo jirdilay. Ninkaan ayaa soo iibsaday eyga yar si uu u korsado balse waxaa la sheegay mudo gaaban ka dib in uu ka xiiso dhigay.
Ninkaan ayaa eyga ku xiray suuliga iyo qolka istoorka isaga oo jirdilay markii uu ku kaadiyay dhulka. Ninkaan ayaa eyga dilay ka dib markii uu bac madaxa u galiyay ka dibna uu barkin dhulka kula qabtay. Ninka ayaa ku dooday in uu arin kale ka careysnaa sidaa darteedna uu caradiisa kula dhacay xayawaanka.
Si kastaba ha ahaatee, ninkaan ayaa sheegay in uu u xiisay eeygiisa. Dambi oogayaasha ayaa dalbaday in ninkaan lagu xukumo xabsiga ugu dheer. Midka mid ah dambi oogayaasha ayaa sheegay in haddii qof bani’aadam ah sidaan loo dili lahaa ninkaan lagu xukumi lahaa 18 sano oo xabsi ah.
Ninkii nabiga (scw) aflagaadeeyay oo gurigiisa dab la qabadsiiyay.